हेल्थ टिप्स – Page3– Lokpati.com
राशिफल प्रधानमन्त्री अमेरिका मृत्यु सरकार प्रचण्ड चितवन नेपाली काँग्रेस पक्राउ नेपाल प्रहरी अपराध केपी शर्मा ओली नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
अनुहार कसरी सुन्दर बनाउने ?
काठमाडौं।आज हामी स्वस्थ र सुन्दर हुन हजारौं लाखौं खर्च गछौं। तर, घर वरिपरी नै पाइने सानातिना कुरालाई हामी बेवास्था गरिरहेका हुन्छौं। सामान्यतया पेटको गडबडीको कारणले गर्दा अनुहारको छालामा असर समस्या देखिने गर्दछ। अनुहारको छालाको समस्याले…
कम उमेरमा किन फुल्छ कपाल ? यसरी बचाउनुस् फुल्न र झर्नबाट
एजेन्सी। कम उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याले धेरैलाई चिन्तित बनाएको हुन्छ। त्यसमा पनि कम उमेरमै कपाल फुल्नु झनै चिन्ताको विषय हो। किन फुल्छ कपाल ? कसरी यसबाट मुक्ति पाउने ? यसबारे केही जानकारी लिनिुहोस् । उमेर वृद्धि भएसँगै कपाल कालो बनाउने…
पेरोनिजले ध्वस्त पार्छ पुरुषको ‘सेक्स जीवन’
एजेन्सी। आज पनि सेक्स र सेक्स जीवनसँग जोडिएका समस्याका बारेमा कुरा गर्न मानिसहरू हिच्किचाउने गर्छन्। तर केही मानिसहरू यौन जीवनबारे खुलेर कुराकानी समेत गर्छन्। पेरोनिज एक यस्तो बिरामी हो, जसबारे धेरै कम मानिसलाई मात्रै जानकारी हुन्छ र यसले…
कम यौनसम्पर्क गर्ने महिलाको रोकिन्छ महिनावारी
काठमाडौं। धेरै कम यौनसम्पर्क गर्नेहरूको चाँडै महिनावारी रोकिने एक अध्ययनले पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताले सप्ताहमा एक पटक यौनसम्पर्क गर्नेहरू भन्दा महिनामा एक पटक यौन सम्पर्क गर्नेहरू २८ प्रतिशतले चाँडै महिनावारी रोकिएको पत्ता लगाएका…
काठमाडौं । अनियमित जीवनशैलीको कारण आज धेरै मानिस स्वास्थ समस्याले ग्रस्त छन्। स्वास्थ समस्याको कारणमा मोटोपन पनि एक हो । मोटोपन आज धेरैमा समस्या बनेको छ । मोटोपन आफैमा रोग होइन । तर, धेरै रोगको लागि उर्भर भूमी हो । मोटोपनले धेरै रोगलाई…
हात गोरो बनाउने पाँच घरेलु तरिका
काठमाडौं। अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेकौ उपाय अपनाउने कतिपयः व्यक्तिहरु हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन्। एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ। तपाईँको पनि…
शीघ्र स्खलन रोक्ने चार उपाय
काठमाडौं। तपाईंलाई थाहै होला, मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रका चार चरणमध्ये चरमसुखको चरणमा पुगेको हाराहारीमै वीर्य स्खलन पनि हुन्छ। यौन सुख शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रक्रियाको जटिल सम्मिश्रणबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त थाहै होला। यौन…
जाडोमा देखिने प्रमूख दश स्वास्थ्य समस्या, कसरी बच्ने ?
काठमाडौं, ४ माघ । मौसममा आएको बदलीसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश स्थानमा चिसो बढेको छ। चिसोले मानिसमा धेरै स्वास्थ्य समस्या देखापर्छन्। जाडोमा अन्य मौसममा भन्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई बढि मात्रामा स्वास्थ्य समस्या हुने गर्दछ।…
काठमाडौँ ।अनियमित र असन्तुलित दिनचर्याले धेरै मानिस विभिन्न किसिमका समस्याका शिकार बनेका छन् । आजभोली हरेक मानिसलाई चुस्त तन्दुरुस्त र शाररिक रुपमा फिट रहनु छ। आम मानिसको स्वस्थ रहने चाहाना हुन्छ। आजको मानिस शारीरिक फिटनेस चाहान्छ ।…
एजेन्सी । हरेक बाबाआमाको सपना हुन्छ बच्चा मानसिक र शारारिक रुपमा स्वस्थ रहोस् । यद्यपि, अनियमित दिनचर्या तथा गलत खानपानको असर युवावर्गमा मात्र नभएर बालबालिकामा पनि देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा बच्चा स्वस्थ राख्नको लागि पहिलेदेखि योग…